घर ज’ल्दा श्रीमान श्रीमतीको मृ’त्यु – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारघर ज’ल्दा श्रीमान श्रीमतीको मृ’त्यु
घर ज’ल्दा श्रीमान श्रीमतीको मृ’त्यु
लम्जुङ । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ सेग्ले (सिमपानी) मा एक घरमा आ’ग’ला’गी हुँदा एक दम्पतीको मृ’त्यु भएको छ ।घरमा आ’ग’ला’गी हुँदा ५६ वर्षीय धर्मराज भण्डारी र उनकी ४५ वर्षीया श्रीमती पशुपति भण्डारीको
गएराति मृ’त्यु भएको खुदी प्रहरी चौकीका हवल्दार उत्तम गुरुङले बताए ।बढी मा’द’क पदार्थ से’व’न गर्ने गरेकाले १०/१५ दिनअघि मात्रै दुवै जना सु’धार केन्द्रमा बसेर घर आएका थिए । पेशाले धर्मराज पूर्वगोरखा सैनिक रहेको र छोराछोरी कोही नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
ग्यास लि’क भएर आ’ग’ला’गी भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ढुंगामाटोको गा’ह्रो र जस्तापाताको छानो भएको ध’न्सार जस्तो एकतले घर सबै ज’ले’र न’ष्ट भएको छ । घरभित्र रहेका केही पनि सामान न’काल्न नभ्याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
थप समाचार –परिवारको कान्छी छोरी हुन् नबिना अर्थात खुइली। २०६४ सालमा बुबाको मृ’त्यु भयो। घरमा भएका सबै छोरीको बिहे भैसकेकाले गर्दा अब त्यो घरमा नबिबा र उनको आमा मात्रै बस्न थाले। केही समयपछि नबिना आफ्नो आमालाई लिएर काठमाडौँ आइन्।
काठमा डौँमा दुखसुख जीवन चलिरहेकै थियो। कला क्षेत्रमा नबिनालाई आमाले नै सपोर्ट गर्द थिन्। बुबा गुमाएको १० वर्षपछि नबिनाले आमालाई पनि गु’माइन्। क्या’न्सरले थलिएकी आफ्नी आमालाई बचाउनको लागि भरपुर कोसिस गर्दा पनि भगवानको अगाडि उनको केजी सीप लागेन।
आफ्नो जन्मदिने बुबाआमालाई गु’माएपछी नबिनाले शम्भु थापा, बखतेलाई नै आफ्नो बुबा मान्दै आइरहेकी थिइन्। शम्भु दाइले पनि उनलाई आफ्नो छोरी जस्तै माया गर्दै आइरहेका थिए। शम्भु दाइले भनेको एउटा कुराले गर्दा नविना अझैपनी मू’र्छा पर्ने गर्छिन्।
अन्तिम चोटी हुनसक्छ शम्भु दाइले नबिनालाई तिम्रो बिहे गरेर खुट्टा धोएर दिन मन छ भनेको अझै पनि सम्झन्छिन् नबिना र बारम्बार शम्भु दाइको मन म’ष्तिष्कमा आइरहन्छन् शम्भु दाइ। उनले सिरियलमा बाबुछोरीको रुपमा अभिनय गरिरहेको सम्बन्ध रिलमा मात्रै सिमित थिएन।
यो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै रियलमा परिणत भैसकेको थियो। आज पापी कोरोनाले शम्भु दाइलाई हामी माझ बस्न दिएन। खुइलीले रुँदै भनिन्, टु’हुरी छोरीले बल्लतल्ल एउटा सहारा बनाएकी थिइन्, मेरो आँखामा किन यसरी खुसी देख्न सकेनौं ? मेरो खुसी किन देख्न चाहाँदैन यो भगवान भन्दै भ’क्कानिएर रुन थालिन्।
उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत लेखेकी छिन्,अन्तत मलाई टु’हुरो बनाएरै छो’डिस्यो है डेडि जन्मदिने बुबाआमा नरहे पनि हजुरलाई नै बुबाआमा मानेको थिए र हजुरबाटै बुबाआमाको माया पाएको थिएँ। तर हजुरले पनि यसरी बिचबाटोमै मलाई छोडेर टु’हुरो बनाइसिन्छ भन्ने कल्पनामा पनि सोच्न सकेको थिइन।
केही भन्न र सोच्न पनि सकेको छैन डेडि म टु’हुरो भएँ, मलाई गाह्रो भयो डे’डि, कसरी गरुँ यो हातले हजुरलाई अन्तिम बिदाई। जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भयो । बखते दाइ तपाईको मृ’त्युको खबर लेख्दा हात का’पिहरेको छ । आज यो भगवानलाई मज्जाले गा’लि गर्न मन लागेको छ ।
भगवान तिमिले ती नारीको दु’ख किन देखेनौ ? जसले आफ्नो श्रीमान ब*’चाउन श्रीमतिले गरेकि पुकार किन सुनेनौ भगवान तिमिले ? बुवा ब’चा’उन छोरिले गरेको मेहेनत किन देखेनौ भगवान ? आमाको मृ’त्यु भएको सात दिन मात्र भएको थियो ।बखते दाइ आमाको काज’किरि’यामा बस्नु भएको थियो ।
केही दिन अघि मात्रै हल्का रमाइलो कमेडी सिरियलमा कोरोना लागेको अभिनय गरेका बखतेले यतिबेला त को’रोनालाई जितेका थिए र खुसी बाँ’डेको अभिनय गरेका थिए तर त्यो अभिनय आज अभिनयमै सिमीत रह्यो। रियल लाइफमा भने उनले को’रोनालाई जित्न सकेनन्।
पापी को’रोनाले आमाको क्रि’या गर्न बसेको बेला पनि छोडेन। तपाईंको आत्माले ची’र शा’न्ति पाओस् बखते दाइ। एक्कासी को’रोनाको नजर कलाकार बखतेको शरीरतिर लाग्यो ।शरीरमा अप्ठ्यारो अनुभव भए पछि शम्भु थापालाई तुरुन्तै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
को’रोनाको ल’डा’इ ल’ड’दै थिए शम्भु दाइ, को’रोनाको कारण फोक्सोमा नि’मोनिया देखा पर्यो । नि’मोनियाले फोक्सो ड्या’मे’ज भै सकेको रहेछ । डाक्टरहरु अ’होरात्र लागि परे शम्भु दाइलाइ ब’चा’उ’न । तर डाक्टरको पनि भगवानको अगाडि केही च’लेन ।
लामो समयसम्म पाटन अस्पतालको भे’न्टिलेटरमा उपचार गराइरहनु भएका हामी सबैको प्यारो कलाकार बखते दाइलाइ आज स’दाको लागि बि’दाइ गरेको छ आफ्नो जन्म दिने आमाको मृ’त्यु’को शो’क त छदै थियो बखते दाइलाइ । आमाकै काममा बसेको बेला पा’पी को’रोनाको नजर लागि अस्पताल भर्ना हुनु पर्दा कस्तो पी’डा भएको थियो होला बखते दाइ तपाइलाइ ?
आफुलाइ जन्मदिने आमाको शो’क मा डु’बेर आफ्नो कर्म सं’स्कार पनि पुरै गर्न नपाउदै छोडेर अस्पताल जानू पर्दाको पी’डा हामी सबैले देख्दा हामी पनि मन थाम्न सकेका छैनौ बखते दाइ । वरिष्ठ हाँस्य कलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’को नि’धन भएको छ ।
उहाँको शनिबार बिहान करिब साढे ४ बजे पाटन अस्पतालमा नि’धन भएको हो ।पारिवा रि’क स्रोतका अनुसार को’रोना सक्रमित भए पछि थापालाई दुई साताअघि पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कलाकार थापा पछिल्लो समय टेलि फिल्म हल्का रमाइलो र गोलमालमा देखिँदै आउनु भएको थियो ।
उहाँलाई ९ दिनसम्म भेण्टिलेटरमा राखियो ।को’रोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि १९ दिन अगाडि अस्पताल भर्ना गरिएका थापाको स्वास्थ्यमा झन् ज’टिलता देखिएको कारण गत मंगलबार साँझबाट भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो ।कलाकार तथा निर्देशक जीवन थापाले भन्नुभयो दाईलाई जति प्रयास गरेपनि ब’चा’उन सकिएन ।
‘१९ दिन अगाडि अस्पताल भ’र्ना हुनुभएका थापाको गत मंगलबार दिनसम्म अवस्था सा’मान्य नै रहेको थियो’ जीवनले भन्नुभयो ‘मंगलबार साँ’झबाट श्वा’स प्र’श्वासलगायत केही समस्या देखिएकोले उहाँलाई थप उपचारका लागि अस्पतालमा लगिएको थियो ।भिडियो